Isiqithi sasePearl - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJoel & Caleb
Island Pearl , njengoko igama libonisa, yinto enqabileyo kwiSiqithi-ikhaya elibekwe kakuhle kwindawo ephambili ekwaziyo ukufikelela kwisitulo esinamavili.
** Ukurhoxiswa kwe-COVID/Utshintsho **
Siyaqonda ukuba ukuba ukuvala itshixo kuthetha ukuba akuvumelekanga ukuba uze kuhlala, kwahlukile kunokurhoxisa okanye ukutshintsha indawo ebhukishayo ngenxa yezinye izizathu. Ukuba ukuvalwa kuthetha ukuba wena (njengomntu obhukishayo) akuvumelekanga ukuba uze kuhlala, siya kukunika ukhetho lokurhoxisa kwaye ufumane imbuyiselo epheleleyo okanye utshintshe imihla yakho. Nceda usibuze ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nolu nikezelo njengoko okunye ukukhutshwa kunokusebenza ngokusekwe kwisaziso, izithintelo zokwakhiwa kweqela, njl.
** Malunga nekhaya **
"I-Island Pearl" yindawo entle kakhulu, egcwele ukukhanya, enemigangatho enye yedolophu egcwele isibongozo kumbindi weCowes, kwaye uya kunqwenela ukubuyela emva kwexesha. Ezinye zezinto ezininzi zeli khaya lithandekayo zichazwe ngezantsi:
** Iindawo zangaphakathi **
Ikhitshi eyonwabisayo evulekileyo evulekileyo ikhitshi / indawo yokutyela / indawo yokuhlala (eneTV, isidlali seDVD kunye nendawo yomlilo ye-coonara), ivula kwintendelezo ehonjisiweyo. Ngaphandle kwekhitshi, kukho indawo yokuhlala yesibini (eneTV) efakwe kabini njengegumbi lesine lokulala elilungele iindwendwe ezinemiba yokuhamba kunye/okanye nezitulo ezinamavili.
Kulandele amanye amagumbi okulala amathathu, igumbi lokulala eliphambili elineengubo zokuhamba kunye ne-en-suite (eneshawa, indlu yangasese kunye namampunge). Igumbi lokuhlambela eliphambili lineshawari efikeleleka kwisitulo esinamavili (kunye neyunithi yamampunge kunye nendlu yangasese). Kwakhona kufunyenwe indawo yokuhlamba yaseYurophu enomatshini wokuhlamba.
** Iindawo zangaphandle **
Intendelezo ebiyelwe ngokupheleleyo, ehonjisiweyo kwindawo entle ixhotyiswe nge-BBQ yegesi kunye netafile enkulu yangaphandle enezitulo ezinde zebhentshi kwaye ilungele abantwana okanye izilwanyana zasekhaya. I-carport ephindwe kabini ivumela indawo yokupaka izithuthi ezimbini.
** Ikhitshi **
Ikhitshi elimiselwe ngokupheleleyo lixhotyiswe ngezixhobo zokupheka, izitya, i-cutlery, i-microwave, umatshini wekofu ohambelana ne-Nespresso, i-toaster, iketile, njl.
** Iinkqubo zokufudumeza/zokupholisa **
Kweyona ndawo iphambili yokuhlala kukho udonga olunyuswe ngasemva kwiyunithi yomoya-moya kunye nendawo yomlilo ye-coonara. Indawo yokuhlala yesibini ikwaqulathe udonga olunyuswe kwi-air-conditioner ye-reverse. Amagumbi okulala 1 & 2 omabini anezifudumezi ezixhonywe eludongeni, kwaye kukho iheater ephathwayo enokusetyenziswa apho kuyimfuneko.
** Ulungelelwaniso lwebhedi **
"I-Island Pearl" ilungiselelwe ukuba ilale kamnandi nakuphi na ukudityaniswa kwabantu abadala kunye nabantwana ukuya kuthi ga kwi-9:
Igumbi lokulala 1: Ibhedi ye-Queen enye
Igumbi lokulala 2: Ibhedi ye-Queen enye
Igumbi lokulala le-3: Iseti enye yeebhedi ezingatshatanga zikaKumkani kunye nebhedi enye yeKumkani
Igumbi lokulala 4: Ibhedi enye enokulungela umntu okhubazekileyo
Kukho ne-divan egobekileyo kwigumbi lokulala le-4 elilungele umntu omdala omnye okanye umntwana.
** ilinen **
Ukubhukisha okusemgangathweni kuza needoona ezinamagqubu, imiqamelo engenamagqubu, iitawuli zeti, iitawuli zesandla kunye neebhafu. Iindwendwe zinokuza namaphepha azo (aflethi nafakelweyo), imiqamelo neetawuli okanye zikhethe ukuhlawula ngaphezulu kule 'linen yokuzikhethela'. Iindleko zokubonelela ngelinen ekhethiweyo yintlawulo enye yokuhlala kwi-30 yenkosi / ukumkanikazi / ibhedi ephindwe kabini kunye ne-$ 15 ngebhedi enye. Nceda ucebise ukuba ungathanda le nkonzo yongezelelweyo.
** Amaxesha aphezulu **
Nceda uqaphele ukuba ngexesha lexesha lasehlotyeni lencopho kunye namanye amaxesha encopho, ** jonga amaxesha ** amiselwe njengentsimbi yesi-3pm (ngaphandle kokuba kulungiselelwe kwangaphambili). Nceda uqaphele kwakhona ukuba ufumana ithuba lokuqesha** ilinen yelinen** kula maxesha, oko kunokubandakanya ukushiywa kwelinen ngaphandle kodwa iibhedi ezingalungiswanga.
** Imisebenzi, imibhiyozo kunye neZikolo **
Nceda uqaphele ukuba ikhaya alifanelanga imibhiyozo, amatheko okanye iminyhadala emikhulu. Ikhaya nalo alithathi kubhukisho ngaphezu kweZikolo.
4.77 · Izimvo eziyi-97
Umbuki zindwendwe ngu- Joel & Caleb
Izimvo eziyi-5 580
Yonke imibuzo kufuneka ibhekiswe kuJoweli, uKalebhi okanye uBernadette ePhillip Island Holiday Homes.